CIYAARAHA CAALAMKA | Ciyaaro Online | Page 5
Home - CIYAARAHA CAALAMKA (page 5)
Argentine: 3,000 oo taageerayaal ah oo laga mamnuucay Koobka Adduunka,sababta?
Xiriirka Kubadda Cagta Dalka Argentine ayaa waxaa ay daawashada iyo ka qeybgalka ciyaaraha Koobka Kubadda Cagta Adduunka ka mamnuuceen 3,000 oo taageerayaal reer Argentine ah . Arrintan ayaa xiriirku ku sheegay in ay tahay diiwaanka hore ee taageerayaashaas oo uu ku jiro rabshado badan iyo in ay halis geliyeen amniga dadka Ciyaaraha ku matala dalka Argentine. Saraakiil ka tirsan xiriirka ...
Zaha oo ku guuleystay xiddigga Bisha EA SPORTS
Weeraryahanka Kooxda Crystal Palace,Wilfried Zaha ayaa ku guuleystay xiddigga Bisha ee EA SPORTS kaddib markii xiddiggan uu Bishii April dhaliyay afar gool. Xiddiggan ayaa waxaa uu kooxdiisa ka caawiyay in ay ka badbaaddo u laabashada heerka labaad,waxaana codeynta ay qaadday EA SPORTS uu helay xiddigga 1aad ee billadda Billaha ah helay. Codbixintan waxaa ka qeybgal wariyayaal,falanqeeyayaal iyo taageerayaal,markii billadda la guddoonsiiyay waxa auu ...
Kooxda Guangzhou oo ganaaxday qaar ka mid ah shaqaalaheeda.
Kooxda Guangzhou Evergrande ee Dalka China ayaa ganaaxday qaar ka mid ah shaqaalaha Kooxda kaddib markii ay kooxda fadeexad ka soo gaartay ciyaaraha Champions League ee Qaaradda Aasiya. Arrintan ayaa la xiriirta kaddib markii xiddig ka tirsan Kooxdan oo ciyaarayay tartanka ay ka jeexan tahay Fanaanadda kaddibna la waayay fanaad loogu beddelo. Saraakiisha ka socotay Kooxda ayaa soo bixiyay Fanaanad ...
Sky oo dacwad uga guuleysatay sharikadda Mediapro
Sharikadda Baahisa Ciyaaraha ee Sky,ayaa waxaa ay dacwad uga guuleysatay sharikadda Baahinta Ciyaaraha ee lagu magacaabo Mediapro. Sharikadda Mediapro,ayaa sanadkii la soo dhaafay iibsatay xuquuqda baahinta Ciyaaraha Serie A-da Dalka Talyaaniga,waxaana horay u heystay Sky,hayeeshee dacwad ay arrintaas ka gashay ayaa maanta loo xukumay. Maxkamadda ku taalla Magaalada Milan ee dalka Talyaaniga ayaa waxaa Sky, u xukmisay baahinta Ciyaaraha Serie A-da. ...
Wakiillo ka socda Real oo Neymar kula kulmay Brazil
3-da halyey ee Spain ee aan wali arag billadda Europe?
Andres Iniesta, Iker Casillas iyo Fernando Torres,waxaa ay qeyb ka ahaayeenw aqtiga dahabiga ah ee dhinaca kubadda Cagta Xulka Spain iyo kooxaha ay matalaan. Waxaa ay dalkooda la qaadeen Koobka Kubadda Cagta Adduunka ee dhacay 2010kii,waxaa ay sidoo kale dakiida uga qaadeen Koobka Europe labo jeer oo kala ah 2008 iyo 2012. Haddana ma helin billadda ugu wanaagsan ee UEFA ...
Laliga: Sevilla vs Real Madrid,safafka
Juventus vs AC Milan, Coppa Italia Final,safafka
7 Ciyaartooy oo Chelsea soo maray ayaa hadda dacwad ku oogaya,sabab?
7; ka mid ah Ciyaartooydii soo martay Kooxda Kubadda Cagta Chelsea gaar ahaan xilligii ay da’yarta ahaayeen ayaa sheegay in ay sharciga la tiigsanayaan Kooxda Chelsea. Ciyaartooydan ayaa kooxda da’yarteeda ka tirsanaa sanadihii 1980 ilaa 1990kii,waxaana hadda ay ku doodayaan in lagu sameeyay midab takoor iyaga oo sheegay in ay dhaqankaas liita u yihiin dhibbanayaal. Waxaa ay sheegeen in tababarahoodii xilligaas ...
Milan iyo Monoco oo is dhaafsanaya Falcao iyo Andre Silva
Kooxaha kubadda Cagta ee AC Milan iyo Monoco ayaa is dhaafsanaya Ciyaaryahannada kala ah Falcao iyo Andre Silva. Arrinkan ayaa soo baxay kaddib markii Kooxda AC Milan ay billowday wadahadalka ay iu dooneyso Falcao,waxaana Monoco ay weydiisatay Milan in ay bixiso beddelka ciyaaryahanka ay dooneyso. Sida ay qortay Tuttosport. Andre Silva iyo Radamel Falcao,waxaa ay wadaagaan hal wakiil,waxaana ay u badan tahay ...
FC Porto oo Arsenal koob uga qaadday Emirates
Da’yarta Kooxda Kubadda Cagta FC Porto ee dalka Portugal ayaa waxaa ay xalay koobka International Premeir League Cup ka qaadeen dhiggooda Kooxda Arsenal oo ay kula kulmeen Garoonka Emirates ee naadiga Gunners ay ku ciyaarto. Madi Queta,ayaa goolka kaliya ee ay ku garaaceen Arsenal u dhaliyay da’yarta Kooxda FC Porto sidaas ayaana koobka caalamiga ah ee horyaalka Ingiriiska lagu geeyay ...
PSG oo ku guuleysatay French Cup
Kooxda kubadda Cagta PSG ee dalka France ayaa wxaa aay xalay ku guuleysatay Koobka Kubadda Cagta ee French Cup kaddib markii ay xalay 2-0 ku garaacday Koox ka ciyaarta horyaalka heerka saddexaad ee dalka France. PSG waxaa ay goolasha ka kala heshay Ciyaartooyda kala ah; Giovani Lo Celso iyo Edinson Cavani,iyada oo xiddigga lagu magacaabo Kylian Mbappe laga diiday gool uu dhaliyay kaas ...